Yenza ithisisi yenkosi yakho ibhalwe ziipapernerds zobungcali
Yenza ithisisi yenkosi yakho ibhalwe
Ngaba iithisisi zemasters zibhalwe ngokufanelekileyo. Unathi ufumana uncedo olukhawulezileyo kumbhali onesiporho onamava.
Ngaba ithisisi yenkosi ibhalwe yingcali - Kutheni?
Ithisisi yenkosi imele ukwenziwa koviwo lokugqibela lomfundi we-master.Awahlukanga kuphela ngokobubanzi ithisisi yenkosi Kangangoko kunokwenzeka kwi-thesis ye-bachelor, kuba isiseko sokubhalwa kwethisisi eyimpumelelo kwinkosi kukwaziswa kokuzibandakanya okungqinelanayo kunye nokujolisa kwinjongo. Ukongeza kwi-thesis ye-bachelor echazayo kuphela, eli nqanaba lifuna umsebenzi ozimeleyo ekujonganeni nemibuzo engasonjululwanga. Ukulungiselela le njongo, umfundi uhlala enikwa amaphepha angama-60-80 ukuze abonise ulwazi olucwangcisiweyo kunye nolwazi oluthe ngqo ngezifundo ukuza kuthi ga ngoku. Oko kuvakala ngathi ngumsebenzi omninzi neso sizathu sokuba abafundi abaninzi baziva bexakekile ngulo msebenzi ubalulekileyo kwaye ubandakanyeka. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba ufune uncedo olusemthethweni ngokusemthethweni.
Ukubhala ithisisi yenkosi ngoncedo lweengcali
Kodwa kuziphatha njani ukugunyazisa umntu Ababhali bomoya ngokwasemthethweni? Ngaba kuya kufuneka ndiqwalasele ngeziphumo ezinje ngomngcipheko wokukopa apha? Okanye ngaba zikhona iindlela ezisemthethweni zokunxibelelana ne- Ukubhala ithisisi yenkosi ukuvumela uncedo?
Ngengqondo ebanzi, enqatshelwe ukudlula ngaphandle kweengcinga ezingamakiswanga njengezakho. Kodwa hayi ukufumana uncedo ekufumaneni uncwadi kunye nokuhlaziya iinkqubo zokucinga. Oku kuthetha ukuba izimvo ezivela kwabanye zinokufumaneka ngaphandle kokuthandabuza kwaye zisetyenziselwe ukwenza owakho umsebenzi.
Ngoncedo lwabasebenzi bethu abaziingcali, ke ngoko akukho ngxaki ukufumana uncedo olukhawulezileyo noluchanekileyo ekuthengweni kwezinto, ekubhaleni nasekulungiseni ithisisi yenkosi.
"Ekugqibeleni ndinesidanga senkosi yam! Kwaye ndinamanqaku aphezulu."
INkosi kuLawulo lwezoShishino
Yintoni ekufuneka ithathelwe ingqalelo ngokubanzi xa kubhalwa ithisisi yenkosi?
Ukuziphatha ngokusesikweni ithisisi yenkosi njenge ithisisi yesidanga: Oku kwahlulwe kwafakwa kwiphepha elingaphezulu, uluhlu lweziqulatho, icandelo lesicatshulwa, uluhlu lwezalathiso kunye nesihlomelo. Ithisisi yenkosi, nangona kunjalo, inomahluko obonakalayo kwinxalenye yezobugcisa, njengoko kukho umda ngakumbi womsebenzi ozimeleyo.
Ngokomgangatho, i-bachelor kunye ne-thesis ye-master yahlukile kumaphepha angama-40-50 kwinkqubo ye-bachelor ukuya kuma-60-80 amaphepha kwi-master's. Nangona kunjalo, umsebenzi obanzi ngakumbi unokwenzeka, kuba ukucaciswa kwesitulo apho umsebenzi ubhalwayo kugqityiwe apha.
Ngokuhambelana, ixesha lokuqhubekeka kwithisisi yenkosi yandiswa ukuya kwi-avareji yeenyanga ze-6, ekwabangelwa yimfuno ephezulu yethsis. Ukuze ungalahleki kwinjongo xa ubhala umsebenzi onjalo, akufuneki ungakhathali kwisicwangciso esifanelekileyo. Njengawo onke amaphepha emfundo, oku ikakhulu kubonisa ulwakhiwo kunye nophando olubanzi loncwadi.
Ukukhetha isihloko esifanelekileyo kubalulekile kwimpumelelo yethisisi yenkosi
Ukusukela Uyilo lwethisisi yenkosi ubukhulu becala kuxhomekeke kwigalelo lakho, isihloko kufuneka sikhethwe ngokukodwa. Ukuze wandise inkuthazo, izihloko apho kukho umdla osekwe kakuhle kwinxalenye yakho yokunceda apha. Okunye okungamele kutyeshelwa loncwadi lwangoku ngesihloko kwaye zeziphi iindlela zokuqokelela ulwazi ezinokusetyenziselwa uphando olongezelelekileyo. Nje ukuba zonke ezi zihloko zijongiwe ngokwanelisayo, ukubhalwa kwelo phepha kungaqala.
Funa uncedo ngexesha elifanelekileyo
das Ukubhala ithisisi yenkosi inokubanzima kakhulu, ngakumbi xa uxinzelelo lwexesha luyinto. Kubaluleke ngokukodwa ukuvavanya ngokuchanekileyo ulwazi kunye nokuqwalaselwa okufunyenweyo. Ewe oku kunokuba ngumceli mngeni omkhulu, ekulula kakhulu ukuba ubenako ngoncedo lweengcali.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neendlela, iikowuti, izingqinisiso kunye nenombolo echanekileyo, nceda unxibelelane neengcali zethu ezivela kumasebe afanelekileyo. Isitokhwe sethu samava siya kufikelela kuzo zonke izifundo kunye nezifundo. Siyavuya ukunceda ngokuqokelela udliwanondlebe, kubandakanya uvavanyo, kwaye singavuya ukukunika ipakeji epheleleyo.
Thembela kubulumko, amava kunye nokukwazi kwethu Umbhali-moya kwaye uzivumele ube ngowakho ithisisi yenkosi bhala ubuchwephesha.
Umhla wokugqibela usondele kwikona, kusafuneka ufundele iimviwo zaseyunivesithi ezizayo kwaye ungazi ukuba wenzeni ngenxa yeengxaki zexesha? Akukho ngxaki! Unathi ufumana uncedo lobuchwephesha kumbhali onesiporho onamava, nokuba ungawuphi umxholo! Ababhali bethu abanesiporho banesishwankathelo esibanzi kwaye esisexesheni soncwadi kwicandelo labo, baqhelene kakhulu nesigama esifanelekileyo kwaye bayayazi indlela yokusebenzisa iindlela ezithile zesifundo ngokuchanekileyo ukuphucula eyakho ithisisi yenkosi erfolgreicher gqibezela. Iqela lethu ecaleni kwakho, ungafundela iimviwo ezizayo kwaye akusekho mfuneko yakuzixhalabisa ngethisisi yenkosi yakho yenzululwazi
Imibuzo malunga ithisisi yenkosi kwaye kubalulekile ukuba unayo
Kubiza malini ukubhalwa kwethisisi yenkosi?
Njengomthetho, ababhali bethu basebenza kwithisisi yenkosi yakho ngaphakathi kweentsuku ezili-14-31. Kuxhomekeke kwinkcazo kunye nesihloko, oku kukodwa. Eli lixabiso nalo ayichazwanga ngokuthe ngqo. Kungenxa yokuba ngexesha umbhali ebhala ngalo ithisisi yakho ye-bachelor, unokusebenza nakwicandelo labucala. Thatha ingqalelo indleko ze Umbhali oyingcali ihlala ifunyenwe njengoko iya kuthatha nawe ixesha elifanayo.
Kuthatha ixesha elingakanani ukubhala ithisisi yenkosi?
Ababhali bethu banako zingaphelanga iintsuku eziyi-14-31 bhala ithisisi yenkosi. Iya ku Ukubhala ithisisi yenkosi efanelekileyo kuwe kuya kuthatha umbhali oyingcali kwicandelo lakho malunga nokuba nje wena.
AmaPapernerds athumela ababhali ngugqirha kunye nokuhlala abangakubhalela umsebenzi olunge kakhulu. Ukuze ube nakho ukukuqinisekisa ngomgangatho ophezulu nangaphezulu kwayo yonke ithisisi yenkosi epheleleyo, buza ngexesha elifanelekileyo.
Ewe umbhali onamava angabhala ithisisi yenkosi yakho ngexesha elifutshane kakhulu, kodwa oku kuyakuchaphazela ngokuqinisekileyo umgangatho kunye nokugqibelela komsebenzi wakho.
Ngubani oza kundinceda ngethisisi yenkosi yam?
Ukongeza kubahlohli abanamava, oogqirha kunye nabaphandi onokuthi udliwanondlebe nabo, unethuba lokusebenza nomqeqeshi okanye umbhali ocetyiswe sithi.
Sinobabhali abagqwesileyo nabahleli kakuhle kunye noonjingalwazi abavela kwezinye iindawo abanokukunceda ngethisisi yenkosi yakho.